Vaovao Mafana · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Novambra, 2018
Hetsi-panoherana Shinoa tamin'ny famoretana ny BBS
Azia Atsinanana13 Novambra 2018
Nitatitra tao amin'ny China Digital Times i Xiao Qiang fa nanao hetsi-panoherana tamim-pahavitrihana an-tserasera - ary tamim-pilaminana kokoa ivelan'ny aterineto ireo mpianatra Shinoa- taorian'ny nanombohan'ny manampahefana Shinoa nametra ny fahafahana miditra amin'ireo famoaham-baovao an-tserasera manan-danja sasany ao Shina. Hoy i Xiao raha nitatitra :
Eoropa Afovoany & Atsinanana10 Novambra 2018
Tandremo! Tsy Hiaro Anao ny Yahoo!
Azia Atsinanana10 Novambra 2018
Araka ny voalazan'ny Reporters Sans Frontieres, nanampy ny famonjàna ilay Sinoa mpanao gazety Shi Tao mandritra ny 10 taona ny fampahalalàna nomen'ny Yahoo!.
Manjaka “Ny Feon'ny Vahoaka”: Tsy Maintsy Anaovana Latsabato ao amin'ny Parlemanta Ireo Krizin'ny Praiminisitr'i Sri Lanka
Azia Atsimo09 Novambra 2018
Miantona ny toedraharaha politika ao Sri Lanka satria nalahatry ny filoha hanaovana latsabato ao amin'ny Parlemantera ny hanapahana hevitra amin'izay tokony ho praiminisitry ny firenena.
Voasakana ve ny blog-city tany Shina ?
Azia Atsinanana09 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Hatramin'ny omaly tolakandro, nanomboka nosakanana tany Shina ny blog-city, BSP malaza. Mbola eo ambany fanivanan'ny GFW (Manda Aroafo Lehibe) izy ankehitriny, ilay tetikasa hamantarana ireo teny lehibe sy manakana tranonkala. Mbola hita any amin'ny tanibe Shina ny blog-city rehefa mampiasa ny...
Fandrahonana ny bilaogera Afghana
Afganistana07 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ity lahatsoratra ity dia nesorina noho ny fangatahan'ilay bilaogera Afghana voakasik'izany, satria nisy ny vaovao nanova tanteraka ny tantara . Toy izao manaraka izao ny votoatin'ny lahatsoratra: Nahazo fandrahonana ho faty i “Sohrab Kabuli“, bilaogera Afghana sady mpandresy tamin'ny...
Noafahana ilay bilaogera Irakiana Khalid Jarrar
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ilay bilaogera Irakiana, Khalid Jarrar , izay nosamborin'ny polisy mpitsikilo Irakiana araka ny notaterinay dia navotsotra araka ny filazan'ny rahalahiny Raed sy ny reniny Faiza . Tsy mpankafy velively ny fisian'ny Amerikana any Iràka ny fianakaviana Jarrar. Ity zavatra...
Maneho Hevitra Momba Ny Star Wars Izao Tontolo Izao
Mediam-bahoaka06 Novambra 2018
Mikaroka ireo lahatsoratra momba ny Star Wars nosoratan'ireo bilaogera maneran-tany aho amin'ny alàlan'ny tenifototra starwars+globalvoices ao amin'ny del.icio.us. Raha mahita lahatsoratra hafa momba ny Star Wars avy amin'ireo bilaogy iraisam-pirenena ianao, mba mandraisa anjara anatin'ny lisitra amin'ny fametrahana MIARAKA ny tenifototra "starwars" sy "globalvoices" eo aminy.